Kenya oo adkeysay amaanka xaafadda ay Soomaalida ku badan yihiin + Sababta - Caasimada Online
Home Warar Kenya oo adkeysay amaanka xaafadda ay Soomaalida ku badan yihiin + Sababta
Kenya oo adkeysay amaanka xaafadda ay Soomaalida ku badan yihiin + Sababta
Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada Booliska dowladda Kenya ayaa si aad ah u adkeeyay amaanka xaafadda Islii ee magaalada Naiorbi, kadib markii maalmihii u dambeeyay ay halkaas ka dhaceen falal amni daro ah.
Guddiga amniga Xaafadda Islii oo la hadlay VOA ayaa sheegay in ciidamada badan ee lagu soo kordhiyay xaafada Soomaalida ku badan tahay ee Islii, ay tahay sidii looga hortagi lahaa kooxo cusub oo burcad hubaysan ah oo dhac ka gaysanaya xaafadaas.
“Guddiga amniga iyo laamaha amniga maalmahan oo dhan shirar ayay lahaayeen iyo qaabkii looga hortagi lahaa burcadkaas, oo hadda qaarkood la qabtay, kuwa kalena la dilay. Burcadkaas caadeysatay in dadka dhacaan dowladda waa la socoto, amniga xaafadana waa la sugaya” ayuu yiri Maxamed Ismaaciil oo ka tirsan Guddiga amniga ee xaafada Islii.
“Xaafada Islii kali ah ma aha, guud ahaan waa caasimada oo dhan. Asbuucyadii lasoo dhaafayna waxay aad iyo aad kor ugu kacday xaafadeena Islii, illaa heer ay gaartay inay dilaan mid kamid ah Ganacsatada markii uu damcay in uu iska dhiciyo.”
Ciidamada booliska ayaa lagu daadiyay wadooyinka waaweyn iyo xaafadaha magaalada Nairobi, ayaga oo baadi goobaya kooxaha dhaca geysanaya ee sida gaarka ah u bartilmaameedsanaya dadka ajaanibta ah, gaar ahaan Soomaalida.
Ganacsatada Soomaalida ah ee Xaafada Islii ayaa maalmihii la soo dhaafay muujinayay walaac la xiriira beegsiga lagu haayo, waxaana 8-dii bishaan xaafada Islii lagu dilay Wiil Dhalinyaro Soomaali ah, ayada oo laga qaatay taleefoon uu watay.
Si kastaba, arrimahan ayaa imanaya xili dhaqaalaha dalka Kenya uu hoos u dhacay, islamarkaana ay dhawaan dowladda heegan buuxa galisay ciidamada, si looga hortago khataraha uga imaanaya argagixisada.